Sida loo booqdo Aqalka Cad iyo Pentagon | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Maxaa la arkaa, Washington
Mareykanka waa waddan aad u weyn laakiin mahadsanid shineemo iyo telefishanka waxaa jira meelo astaan ​​gaar ah oo dalxiisayaashu had iyo jeer doonayaan inay booqdaan. Waxaan sameyn karnaa liis ballaaran, laakiin aniga waxay ila tahay in labada bog ee cinwaanka maqaalka maanta ku jira ka mid yihiin Shanta ugu sarreysa, sax?
La Casa Blanca Waa fadhiga awooda Mareykanka, uguyaraan waa sida Hollywood iyo Pentagon waxay u egtahay goob qarsoodi ah oo go'aanno milatari muhiim ah. Mareykanka ma aadeysaa Marka halkan ayaan kaaga tagayaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato markaad sameyneyso labadan booqasho ee waaweyn ee dalxiis.
1 Booqo Aqalka Cad
2 Booqo Pentagon
Booqo Aqalka Cad
Aqalka Cad Waa hoyga rasmiga ah ee Madaxweynaha Mareykanka inta uu waqtigiisu socdo, laakiin kuwa booqda Washington DC waxay booqan karaan booqasho ay ku bartaan taariikhda iyo dhaqanka Mareykanka. Ilaa waqti aad u yar kahor, sawiro ma aadan qaadi kareyn, wax niyad jab ah, in kastoo waxtar laheyd, laakiin sanadkii hore Marwada Koowaad ee xilka ka degaysa Michelle Obama ayaa fasaxday sawirada socdaalkii caanka ahaa ee Aqalka Cad.
Dabcan, tikniyoolajiyadda cusub culeys badan ayay saareen arrintan, laakiin waxay sidoo kale nagu qasbeen inaan qaadno tallaabooyin amni oo xad dhaaf ah. Marka maalmahan sawirada dalxiisayaashu ku qaadaan guriga gudihiisa waxaa lagu soo dhejin karaa shabakadaha bulshada oo leh hashtag WhiteHouseTour. Marka sidee isu diiwaan gelin kartaa booqasho hagitaan ah oo Aqalka Cad ah? Marka hore waa inaad sameysatid boos celin oo waxaad haysataa illaa lix bilood ka hor inaad sameyso oo aan ka yareyn saddex toddobaad.
Codsiga booqashada Waa inaad ku sameysaa safaaradda wadankaaga ee Washington. Waa inaad ka tagtaa macluumaadka xiriirka, taariikhaha iyo tirada dadka ka kooban kooxdaada. Booqashooyinka la hagayo waxay dhacaan 7:30 subaxnimo ilaa 11:30 a.m., Talaado ilaa Khamiis, iyo Jimcaha ilaa Sabtida inta udhaxeysa 7:30 a.m. iyo 1:30 pm..
Waxaa jira walxo aadan geli karin ilaa Aqalka Cad: kaamirooyinka, kaamirooyinka fiidiyowga ah, cuntada, cabitaanka, sigaarka ama dhuumaha, dareerayaasha, jel, looshinnada, hubka, mindiyaha ama walxaha fiiqan, boorsooyinka dhabarka, shandadaha, boorsooyinka iwm. Waxyaalahan oo dhan waxaa looga tagi karaa hudheelada u dhow, kabadhyo ay wax yar ka qaadaan laakiin marka aad ka tagto wax walba gacanta kuugu jira. Aqalka Cad ma laha santuuqyo, haa hudheelada iyo Saldhigga Shaqaalaha ee ka agdhow. Haa, waad ku geli kartaa furayaal, boorsooyin, taleefannada gacanta iyo dalladdo.
Sidaan kor ku idhi, sanadkii hore waxaad ku qaadi kartaa sawirro kamarado isku dhafan iyo taleefannada casriga ah. Lama duubi karo fiidiyow iyo istiinyo aan la ogolaan karin. Socdaalku wuxuu soconayaa nus saac marka aad ka gudubto tallaabooyinka amniga Waxaad mari doontaa dhowr qol laakiin ma geli doontid qaybta hoyga ee madaxweynaha iyo qoyskiisu degan yihiin, ama qolka caanka ah ee Oval iyo Garabka Galbeed. Haa, waxaa jira wakiillo Adeegga Sirta ah meel kasta oo iyagana waa loo oggol yahay inay ka jawaabaan su'aalaha si aad ula fal-gasho.
Macluumaad la taaban karo:
Sida loo tago Aqalka Cad: Saldhigga ugu dhow ee laga galo albaabka socdaallada la hago waa Metro Center (bixitaanka 13th Street). Markii aad gaarto dusha wiishka wiishka, qaado bixitaanka 13th Street South, u leexo dhanka midigta wadada E Street oo si toos ah ugu soco 15th Street. Haddii aadan isdiiwaangelin wax safar ah oo aad adigu iskaa u socoto, waa inaad horay u timaaddaa. Waa wadada 15-aad ee safku ka bilaabmayo.
Xarunta Booqdaha ee Aqalka Cad ayaa dhowr meelood ka fog Aqalka Cad waana mid mudan in la booqdo. Waa la soo celiyey, bandhigeeda cusub wuxuu ka kooban yahay ilaa 90 shay oo ay bixiyeen Ururka Taariikhda ee Aqalka Cad qaar badan oo ka mid ahna weligood lama soo bandhigin. Waxaa jira miiska Franklin D. Roosvelt, tusaale ahaan, fiidiyow aad u xiiso badan oo 14-daqiiqo ah ayaa sidoo kale la saadaalinayaa inay kugula talineyso inaad daawato kahor isla safarka.
Booqashada oo dhan waxay socotaa saacad iyo badh. Boggan wuxuu furan yahay maalin kasta marka laga reebo Kirismaska, Mahadcelinta iyo Sannadaha Cusub laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 4 galabnimo iyo albaabku waa bilaashku. Leh dukaan hadiyadeed iyo waxaa jira nooc ka mid ah miiska madaxweynaha oo ku yaal Qolka Oval halkaas oo aad sawir ka qaadan karto. Ugu dambeyntiina, haddii aad safar aad jadwal u leedahay aad u dhaqso badan, waxaan kuu sheegayaa in Diisambar 1 laydhadhka Geedka Kirismaska ​​ee Aqalka Cad si rasmi ah loo daari doono.
Dalxiisyada Aqalka Cad waa bilaash.
Pentagon-ka wuxuu ku yaal meel ka baxsan Washington DC, Arlington. Waa wax ku saabsan Xeryaha GGuud ee Wasaaradda Difaaca Mareykanka y Waxay u furan tahay booqashooyin hagitaan ah.
Booqashooyinkan la hagayo waa la ballansan karaa ilaa 14 maalmood safarka ka hor oo aan ka badnaan 90 maalmood ka hor. Dhacaya laga bilaabo Isniinta ilaa Jimcaha, marka laga reebo ciidaha, inta u dhexeysa 9 subaxnimo iyo 3 galabnimo. Kooxuhu si dhakhso leh ayey u buuxsamaan markaa haddii aad jeceshahay fikradda booqashada, waa inaad horay u sii qabsato. Codsiga ajaanibta waa in laga sameeyaa safaaradda.
Booqashooyinka la hagayo waxay soconayaan hal saac waxayna gaarayaan ilaa laba kiilomitir gudaha dhismahan xiisaha leh oo ah midka ugu weyn adduunka. Taariikhda afarta laamood ee ay militariga Mareykanka u kala qeybsan yihiin ayaa laguu sharxi doonaa adiga sidoo kale waxaad awood u yeelan doontaa inaad booqato xuska gudaha ah ee la sameeyay wixii ka dambeeyay Sebtember 11, 2001. Waxaa ku yaal kaniisad iyo Hoolka geesiyaasha oo leh magacyo kuwii dhintay.
Ma jiraan wax dhigashada gawaarida gawaarida sidaas darteed waa inaad ku timaadaa gaadiidka dadweynaha. Saldhigga kuugu dhow waa Pentagon ee khadka liinta ee tareenka dhulka hoostiisa mara, laakiin haddii aad gaari leedahay waad ka tagi kartaa iyadoo la dhigto xarunta loo yaqaan 'Pentagon City Mall' waxaadna socon kartaa shanta daqiiqo ee ka soocaya dhismaha millateriga iyadoo loo marayo tunnelka dadka lugeynaya Albaabka martida waxaa laga sameeyaa daaqadda 'Pentagon Tour' ee u dhow irridda tareenka.
Waa inaad xaqiijisaa ama hubi ugu yaraan hal saac safarka ka hor jadwalka maxaa yeelay waa inaad ka gudubtaa tallaabooyinka amniga oo aad soo bandhigtaa waraaqaha xaqiijinta Boos celinta iyo baasaboorrada. Boorsooyin waaweyn ama boorsooyin dhab ah ama mobiillo, kaamirooyin ama aalado lama oggola elektiroonig ah dabeecad kale. Ka dib socdaalka gudaha, waxaan kugula talineynaa inaad socotid, taas oo ah halka ay ku taal 11/XNUMX Memorial, oo ku saabsan toban daqiiqo oo soconaya calaamadaha.
Hal safar, hal magaalo, laba booqasho oo waaweyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Washington » Sida loo booqdo Aqalka Cad iyo Pentagon
Maxaa lagu arkaa magaalada Athens